Miss Universe မြန်မာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
News » Miss Universe မြန်မာ	18
Miss Universe မြန်မာ
Posted by မြစပဲရိုး on Dec 17, 2015 in News, Photography | 18 comments
ဟိုး အရင် Miss Universe ပွဲ တွေ တုန်းက တစ်ခြားနိုင်ငံ က ပြိုင်ပွဲဝင် တွေ ကို ပိုကြိုက်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီ တစ်ခါ တော့ ကိုယ့် မြန်မာမိန်းကလေး က အားလုံးထဲ မှာ ဆွဲဆောင်မှု အရှိဆုံး လို့ ထင်တာဘဲ။
လဲ သွားတာတောင်မှ ပုံမပျက် ထိန်းသွားတာ လေးက ပိုပြီးတောင် ဆွဲဆောင်မှု ရှိ တာ တွေ့ရတယ်။
သူတို့ သတင်းရဲ့ ခေါင်းစဉ် မှာ “Can’t keep Miss Universe Myanmar down” တဲ့။
Can’t keep Miss Universe Myanmar down
အမျိုးသားဝတ်စုံ ပြိုင်ရာမှာလည်း အများ အမြင် ထူးဆန်းလွန်းလို့ “The weird and the wonderful national costume” ထဲ မှာလဲ ပါပါသေးတယ်။
သူ့ ဝတ်စုံ ကို တယ်လီဂရပ်ဖ် သတင်းဌာန က ဝေဖန်တာ က “စာခြောက်ရုပ်” နဲ့ တူသတဲ့။
အဖော်တွေ တော့ ရှိပါသေးတယ်။ ဘတ်စ်ကား ပုံ နဲ့ထိုင်းဝတ်စုံ က ထိပ်တန်းပါ။
ကိုယ်တို့ရဲ့ တစ်ခြား ပြိုင်ပွဲ က မန်းနန်းတော် ဝတ်စုံ ကြီး တွေ့ရင် ပိုပြီး ဟင် ဟာ ဖြစ်သွားဦးမယ်။
ဆန်းတိုင်းလဲ သိပ်ကောင်းတာမဟုတ်။ လူရီဖွယ်ဖြစ်တတ်တာ ကို သတိပြုသင့်တယ်။
Miss Myanmar May Barani Thaw holdsatraditional guitar and looksabit likeascarecrow. (Comment from “telegraph.co.uk”)
Miss Thailand Aniporn Chalermburanawong – looking like the front end ofabus is probably better than looking like the back end ofabus. lol:-)) (Comment & Picture from “telegraph.co.uk”)
မေဘရဏီသော် ရဲ့ ပုံက Max Energy အတွက် ပြက္ခဒိန် ထဲ မှာလဲ အတော်လေး လှ တာ တွေ့ရတယ်။
အားလုံးထဲ သူ အလှဆုံး လို့ ထင်တာဘဲ။
တစ်ခြား မိန်းကလေးများ လဲ ရေကူးဝတ်စုံ နဲ့ ကို ကြည့်လို့ ရှုလို့ ကောင်း လို့ တော်ပါသေးတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ ရေကူးဝတ်စုံ တွေ ဝတ်ပြပြီး ဝတ်စုံ က တစ်ခြား လူ က တစ်ခြား ဖြစ် နေတာ တွေ ထက် စာရင် Max Energy ပြက္ခဒိန်က မိန်းကလေး တွေ က နိုင်ငံခြားစံချိန်မှီ ရုပ်ခန္တာ လေး တွေ လို့ ပြောနိုင်မှာပါ။
အမျိုးဘာသာ စောင့်ရှောက် ရေးသမားကြီး များ ခရိုနီ ထုတ် ပြက္ခဒိန် မို့ အသံထွက်ဖို့ မပြောနဲ့ အမြီးတောင် တနှံ့နှံ့ ဖြစ်နေမလားဘဲ။
Wishing you all the best May Thaw. :-)))
E.မြောက်မြောက် says: လိုင်းမကောင်းဘူးဗျာ
မြစပဲရိုး says: ကြည့်သင့်တဲ့ပုံ မြင်ရလို့ တော်သေးဟဲ့။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14461
kai says: ဖိုင်နယ်အထိပါသွားနိုင်တယ်လို့.. အခုတင်သတင်းရတယ်..။
ချောလဲတာက .. အကောင်းဖြစ်သွားတာပေါ့..။
ချောလဲတယ်..။ ပြန်အထမှာ..တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ထလိုက်တာအပြင်.. လူတွေကိုပါလက်ခုပ်တီးအားပေးကြဖို့လုပ်ပြသွားသေး..။
မလိုအပ်ပဲ.. ဖုံးလွန်းအားကြီးနေလို့.. အလှမပေါ်တာမို့… အမှတ်တွေဆွဲချသွားတယ်.. ကြားရပါကြောင်း..။
မြစပဲရိုး says: အဲဒီ တူးပိစ် က သူတို့ ပေးတာ ဝတ်ရ တာ ပြောတာဘဲ။ ဒါကြောင့် ဆင်တူ တွေ တစ်ချို့ ဖြစ်နေတာ။
kai says: အ၀တ်သားထူပြီး ဗိုက်မာဆယ်နေရာ.. အမြှောင်းအစင်းတွေ ဖုံးထားသလိုဖြစ်နေလို့တဲ့.. ဝေဖန်ထားတယ်..။
Wow says: ဗိုက်ချပ်တွေဘာဒွေများ ၀တ်ထားတာမြန်းးးးလားးး Was this answer helpful?LikeDislike 12398
ဇီဇီခင်ဇော် says: Max က လူကြိုက်များတဲ့ အနီ နဲ့
ချောလဲတဲ့ ကလေးမ တစ်ယောက်ထဲမှန်းး ခုမှသိတယ်..
ပြိုင်ပွဲတေ မယ်တေ များးလို့ ဘူ့မှ မသိဘူးးး
Max calendar နဲ့ အပြိုင် ဆက်ဆီ မင်းသမီးတွေ လည်း calendar ရှီတယ် အရီးးး
ကျနော် တို့ က ကိတ်မုန့်ပဲကြိုက်တယ်..
မြစပဲရိုး says: မြန်မာ ဆန်လွန်း တဲ့ မျက်နှာမျိုး၊ ကိုယ်လုံးမျိုး နဲ့ ဝတ်ပြ ရင်တော့ ကြည့်ကောင်းမယ်မထင်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3714
လုံမလေးမွန်မွန် says: မှတ်မှတ်ရရ ဟိုတစ်နေ့က Miss Universe ရဲ့ Official facebook page ထဲ ဝင်ကြည့်တာ Miss Myanmar ပုံတွေကို တော်တော်နဲ့ ရှာမတွေ့ဘူး.. အရမ်းနည်းတယ်… တစ်ယောက်တည်း ရိုက်ထားတာဆို မရှိသလောက်ကို ရှားတယ်..
National Costume က အတော်ကြီး ရုပ်ဆိုးတယ်.. ကယန်း (ပဒေါင်) လူမျိုးတွေရဲ့ တကယ့်ရိုးရာဝတ်စုံအစစ်နဲ့ ရိုးရာဂစ်တာအစစ်ဆိုရင်တောင် အတော်လေး ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်မြင်.. အားအားရှိ ရွှေချချင်နေတဲ့ ကိုယ့်လူမျိုးအကြောင်း ပြောပြန်ရင်လည်း ကိုယ်ပေါင်ကိုယ်လှန်းထောင်းသလိုဖြစ်ဦးမယ်…
ချော်လဲတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တော့ မကြည့်ရသေးဘူး…. ကြည့်လိုက်ဦးမယ်..
kai says: အဲဒီအ၀တ်အစားကို .. စာချောက်ရုပ်နဲ့တူတယ်လို့.. တွစ်တာမှာဝေဖန်ထားကြတယ်..။
Mike says: .တူးပိစ်မှာတဲ့..။
မလိုအပ်ပဲ.. ဖုံးလွန်းအားကြီးနေလို့.. ….အာ့တော့အမှန်ပဲ…ရုပ်ပျက်သွားတယ်
ဦးကြောင်ကြီး says: ပါမိုက် နူးဗါ ထူးတာ မြူးလျှာ..
မြစပဲရိုး says: ဘယ် ဆြာ ကများ “မြန်မာမမို့ ဖုံးဖိထားတယ်” လို့ စွပ်စွဲ နေသတုန်း။
သူကြီး ဘဲ စသလား။
Miss universe Mauritus 2015 swimwear ကို ကြည့်ပါ။
Two pieces တောင်မဟုတ်။ ကလေးလေး တွေ ရဲ့ ရေကူး ဝတ်စုံလို အပြည့် ဖြစ်နေရော။
ဘာလို့ လဲ တော့ မသိ။ http://www.missuniverse.com/photos/index/gallery_id:1 မှာ ဝင်ကြည့်။
ဟန်ဂေရီ swinwear က မြန်မာ နဲ့ တူတယ်။
အောင် မိုးသူ says: အရီးရေ အောက်ဆုံးပုံက မေဘရဏီသော်မဟုတ်ဘူး သူက Miss Universe Myanmar 2016 ထက်ထက်ထွန်းပါ။
မြစပဲရိုး says: အဲဒီ မိန်းကလေး ထက်ထက်ထွန်း က တစ်ခြား အနီ ရောင် မောင်အောင် ရဲ့။
ပြက္ခဒိန် လေးကို ကြည့်ပါဦး။ :-)))
အောင် မိုးသူ says: ဟုတ်တယ် အရီး။ မျက်စိမှားတွားတာ။
alinsett says: ဘတ်စ်ကားကြီး…တက် စီး လိုက်ရ…
မြစပဲရိုး says: အဲဒီ ဝတ်စုံက အမျိုးသားဝတ်စုံ အကောင်းဆုံး ဆုရတယ် ဆက်ဆက်။